I-Spring Equinox 2018: Kuyini futhi kwenzeka nini lokhu? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Radiotierraviva.blogspot.com.es
Iplanethi yethu ayikaze ihlale endaweni efanayo maqondana neLanga: njengoba lizungeza futhi lizungeza ngokwalo, singajabulela imini nobusuku, kanye nezinguquko ezahlukahlukene ezenzeka kuyo yonke indawo njengoba izinyanga zihamba.
Kepha umuntu ubelokhu enesidingo sokuqamba yonke into, nangosuku oluhlala lwazi lapho kunamahora wokukhanya afanayo nasebusuku abizwa nge-equinox. Kuya ngesikhathi sonyaka okwenzeka ngaso, sithi yi-equinox yasekwindla noma i- intwasahlobo equinox. Kulesi senzakalo, sizokhuluma ngalokhu okulandelayo.
1 Yini i-equinox?
1.1 Kwenzeka nini?
2 Yini i-vernal equinox?
2.1 Ngaso sonke isikhathi kwenzeka ngezinsuku ezifanayo?
3 Kwenzekani ngesikhathi se-equinox?
4 Isithinta kanjani i-March equinox?
Uma sithatha i-etymology, i-equinox igama eliqhamuka esiLatin okusho ukuthi "ubusuku obulinganayo". Kepha uma sikhuluma ngale nto, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele ngenxa yobukhulu belanga kanye nezimpawu zomkhathi zeplanethi, ezidala ukuthi kube nokwehluka ebude bosuku ezindaweni ezingafani. Ngakho-ke, incazelo yaleli gama imi kanje: izikhathi zonyaka lapho inkanyezi yenkosi ikhona khona kanye endizeni yenkabazwe yasezulwini.
Ngayo, ushintsho oluphikisanayo lwonyaka lwesizini lwenzeka endaweni ngayinye yasemhlabeni.
Ama-equinox avela phakathi kuka-20 noMashi 21 naphakathi kwe- Septhemba 22 no-23. Endabeni yezwe elisenyakatho, intwasahlobo iqala ngalezo zinsuku zenyanga yesithathu, kuthi ekwindla ngalezo zinsuku zikaSepthemba; okuphambene nenkabazwe eseningizimu.
Yini i-vernal equinox?
Isithombe - Wikimedia / Navelegante
I-equinox yasentwasahlobo ingenye yezikhathi ezilindelwe kakhulu zonyaka. Yisikhathi lapho sishiya ubusika emuva futhi singajabulela amazinga okushisa amaningi azoba mnandi ngokwengeziwe. Kodwa kungani kwenzeka? Iyini incazelo yesayensi yalesi simo?
Ukuphendula lo mbuzo kuyadingeka ukuthi ube nolwazi oluthile nge-astronomy, futhi lokho i-equinox yomdabu yenzeka lapho iLanga lidlula endaweni yokuqala yama-Aries, okuyiphuzu elise-equator yasezulwini lapho inkanyezi yenkosi ekuhambeni kwayo okubonakala minyaka yonke ngokusebenzisa i-ecliptic - isilinganiselo esiyindilinga sendawo yasezulwini esikhombisa inkambo ebonakalayo yeLanga phakathi nonyaka- kusuka eningizimu kuye enyakatho maqondana nendiza ye-equatorial.
Izinto zingaba nzima, ngoba iphuzu lokuqala lama-Aries, kanye nephoyinti lokuqala leLibra - iphuzu lapho inkanyezi idlula khona ku-equinox kaSeptemba 22-23 - alitholakali ezinkanyezini ezibabiza ngamagama. ngenxa yokunyakaza kwangaphambili, okuwukunyakaza okutholwa yi-eksisi lokujikeleza kweplanethi. Ngokuqondile, iphuzu elisithandayo kulesi sikhathi ngama-degree angama-8 ukusuka emngceleni ne-Aquarius.
Ngaso sonke isikhathi kwenzeka ngezinsuku ezifanayo?
Yebo kunjalo, kepha hhayi ngasikhathi sinye. Empeleni, ngenkathi ngo-2012 kwenzeka ngoMashi 20 ngo-05: 14, ngo-2018 kuzoba ngoMashi 20 ngo-16: 15.
Kwenzekani ngesikhathi se-equinox?
Isithombe - UFlickr / uDick Thomas Johnson
Ngaphezu kwalokhu esikubeke ngenhla, ngalolo suku nangezinsuku ezilandelayo, amazwe amaningi agubha imikhosi yawo yasentwasahlobo. Yisikhathi esikhetheke kakhulu sonyaka esiphindaphindwa njalo ezinyangeni eziyishumi nambili, ngakho-ke kuvela ukuthi siyizaba esiphelele sokusijabulela.
Uma ufuna ukwazi okunye okubaluleke kakhulu, nalu uhlu:
Japan: ezweni laseJapan kugujwa uHanami, okuyimikhosi yokubuka nokucabanga ngobuhle bezimbali zezihlahla zama-cherry zaseJapan noma ama-sakuras.
China: kwenzeka ezinsukwini eziyi-104 ngemuva kwenyanga kaSepthemba. Ngalelolanga bahlonipha amadlozi.
Poland: Ngo-Mashi 21 benza umbukiso lapho kungasweleki khona i-sphinx kankulunkulukazi uMarzanna, ohlotshaniswa namasiko ahlobene nokufa nokuzalwa kabusha kwemvelo.
I-México: ngoMashi 21 abantu abaningi bagqoka ezimhlophe ukuya ezindaweni ezahlukahlukene zemivubukulo ukuze bazivuselele.
Uruguay: NgoMgqibelo wesibili ka-Okthoba umbukiso wamakharavani ahlotshisiwe odonswe amahhashi uhamba emigwaqweni.
Isithinta kanjani i-March equinox?
Ukuqedela, ngizokutshela ukuthi i-equinox eyenzeka ngo-Mashi isithinta kanjani, ngoba ikwenza ngezindlela ezahlukene: Lapha kwiplanethi yethu ethandekayo, izinto ezibalulekile zenzeka ngalolo suku, yiziphi:
ENorth Pole kuqala usuku oluzohlala izinyanga eziyisithupha.
Ubusuku obuzohlala izinyanga eziyisithupha buqala eSouth Pole.
Enyakatho nenkabazwe yasentwasahlobo kuyaqala, okubizwa ngokuthi yi-vernal noma i-vernal equinox.
Ukwindla kuqala engxenyeni eseningizimu, ebizwa nge-equinox yasekwindla noma ekwindla.
Sithemba ukuthi uyayijabulela i-equinox vernal.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-equinox yasentwasahlobo